Waa’ee Bulchiinsa Raamsee | Ramsey County
Bulchiinsi Ramsey jiraattota, abbootii qabeenya fi daawwattootaaf tajaajilawwan gosa garaa garaa ni dhiyeessa.
Dhaabbani bulchiinsichaa Gareewwan Tajaajilaa walitti hidhamiinsa qaban afuritti kan caaseffame yoo ta’u gareewwan kunneen wantota armaan gadii irratti deeggarsa fi sagantaalee dhiyeesu:
Fayyaa fi fayyummaa.
Guddina diinagdee fi misooma hawwaasaa.
Odeeffannoo fi ragaalee hawaasaa.
Nageenya fi haqa
Bulchiinsa Raamsee keessa namoota 550,000 ol ta’antu jiraata. Naannoo giddu gala sevencounty Twin Cities walakkaatti argamuutti kan argamu yoo ta’u jirattoota naannichaa 10% qabachuudhaan Minesootaa keessatti bulchiinsa heddumina uummataatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamuudha.
Heddumminaan magaala ta’uu isaatiin Raamseen buchiinsawwan Minesotaa keessatti argaman keessaa isa xiqqaa fi namonnii itti heddummataniidha, akkasumas lafa iskuweer maayilii 170 uwwisa. Hawwaasni keenya akkuma sadarkaa biyyaattuu kan nama hawwatan, seenaa heddu qabaachuu, heddumminaa fi carraalee garaa garaatiin bakka badhaatuu jedhamuun beekama.
Magaalota Bulchiinsa Raamsee Keessatti Argaman:
Qubsuma White Bear
Boordin Komishinarootaa dambiiwwan bulchiinsichaa/naannichaa kan hundeessu yoo ta’u bajataa fi hojmaata bulchiinsichaa irratti sirreffama ni dhiyeessa. Tokkoon tokkoo komishinaraa waggaa afur kan tajaajlan yoo ta’u namni tokko naannowwan (districts) torba keessaa naannoo tokko bakka bu’a jechuudha.
Aangawaan seera fi sirnaa akka seera kabachiisaa olaanaa bulchiinsichaatti tajaajila. Aangawaan seeraa fi sirnaa kun waggaa afuriif filamee kan tajaajilu yoo ta’u, Wiirtuu Mana Amala Sirreessaa Ga’eessotaa (Mana amala sirreessaa), eegumsa fi tajaajila qorannoo (investigative) dabalatee gareewwan ejansii fi hojiiwwan hundumaa ni to’ata.
Abbaan Alangaa Bulchiinsichaa hojjataa seeraa olanaa bulchiinsichaati. Abbaan alangaa bulchiinsichaa fiatamee waggaa afuriif kan tajaajilu yoo ta’u, yakkoota seeran ala raawwataman tokko tokko qorachuudhaaf, dhimmoota seeran wal qabatan irratti bulchiinsicha/naannicha bakka bu’uu fi deeggarsa daa’immaniif godhamu to’chuudhaaf itti gaafatamummaa qaba.
Bulchaan Bulchiinsichaa tajaajilawwan bulchiinsicha keessatti laataman sirnaan dhiyeeffamuu isaanii akka mirkaneessuf boordii komishinarootatiin muudama. Bulchaan kun dambiiwwanii fi bajata bulchiinsichaa hojiirra oolchuu akkasumas gaggeessitoota Garee Tajaajilaa fi hojjattoota dippaartimentiif gaggeesummaa fi kallattii kenuudhaaf itti gaafatamummaa qaba.